ဝါဝင် ဝါထွက်ဘေးကင်းဖို့ ~~ ဦးခိုင်ကြီးနတ် တင်ကြစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဝါဝင် ဝါထွက်ဘေးကင်းဖို့ ~~ ဦးခိုင်ကြီးနတ် တင်ကြစို့
ဝါဝင် ဝါထွက်ဘေးကင်းဖို့ ~~ ဦးခိုင်ကြီးနတ် တင်ကြစို့
Posted by မောင်ရိုး on Jul 4, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 54 comments
ပြောရဦးမယ် အရပ်ကတို့ ………
ရာသီအချိန်အခါကလည်း ဝါဝင်ပြီကိုးဗျ ။ ရွာထဲမှာလည်း ဆူညံဆူညံ ရန်တွေများလွန်းတော့ ကျုပ်တို့အသည်းငယ်တဲ့သူတွေမှာ အားကိုးရှာကြရသဗျ ။ ကျုပ်တို့အောက်ပြည်သားတွေ ဝါဝင်ဝါထွက်မှာ အန္တရယ်ကင်း ဘေးရှင်းစေဖို့ ဦးရှင်ကြီးနတ် တင်ကြတယ်လေဗျာ ။
ဟဲ ဟဲ ကျုပ်လည်း ရွာထဲမှာ ဘေးအန္တရယ်ကင်းစေဖို့
ဦးခိုင်ကြီးနတ် တင်တာပေါ့ဗျာ ။အဲဒါ ခင်ဗျားတို့လည်း ဘေးကင်းရန်ကွာ အောင်ကြောင်းဗျာဖို့ ဦးခိုင်ကြီးနတ် တင်နည်းလေး ပေးလိုက်မယ်ဗျို့ ။
ဦးခိုင်ကြီးနတ် တင်ပုံတင်နည်း ###
နှစ်ထပ်နတ်စင်ကို အိမ်အပြင်ဖက်တွင်ထားပါ ။ ပန်းကန်ပြားအကြီးတစ်ချပ်တွင် ကောက်ညှင်းပေါင်း ၊ ရခိုင်ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးအခွံခွါ ပြီးထည့်ပါ ။
လက်ဖက် အကြော်ဆန်ကို ပန်းကန်ထိတ်တွင် ပုံထားပါ။ ထို့နောက် ကွမ်းယာထုတ်ကိုလည်း ပန်းကန်၏ အစွန်းတစ်ဖက်တွင်ထားပါရန် ။
အောက်ပွဲပေးရန်အတွက် အောက်စင်ပေါ်တွင် အထက်ကပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ပါလေ ။ သို့သော် ငှက်ပျောသီးအခွံမခွါဘဲထည့်ပါရန် ။
ပြီးနောက် …… အောက်ပါစာသားတို့အား ဇတ်သံနှော၍ အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ပါလေ ။
ဂဇက်ရွာရိုး ၊ ပိုင်စံစိုးပါလို့ … တန်ခိုးတေဇော် ၊ ကမ္ဘာ ကျော်ကြက်ဆင် …
မြင်သမျှ မေတ္တာလှိုင် ပါတဲ့ …… နတ်ဦးခိုင်ကြီး ခင်ဗျားးးးးးးး ~~~~
ဂဇက်ရွာချောင်ကြားက ၊ ကျနော်များ မောင်ဆာမိတို့မှာ ၊ လေးစားတာကတမျိုး ၊
အားကိုးတာက တသွယ် … ကြောက်မိတာလည်းတကယ် ၊ ရန်စွယ်တွေရှင်းစေကြောင်း ၊ စီးပွါးရေးလုပ်ကိုင်ကောင်းစေဖို့ ၊ ဒေဝဒါန အလို့ငှါ ၊ ဗလိနတ်စာ စုံလင်စွါနဲ့ ၊ စေတနာ ဝေဖြာကြောင်းရယ် ဖြင့် ပင့်လျောက်လိုက်ပါသည် … … ။ အို ……… ဂဇက်မြို့ပိုင် ၊ နတ်ဦးခိုင်ကြီး ခင်ဗျားးးးး ……………။
(နှစ်ထပ်နတ်စင် အပေါ်ဆင့်မှ ဆွမ်းတော်ပွဲအား လက်နှက်ဖက်ဖြင့် ကိုင်မြှောက်၍ အောက်ပါအတိုင်း အသံနေ အသံထားဖြင့် ရွတ်ပါလေ )
ကွန်းးး စင် မှာ ဆွမ်းတင်လို့ ပြီးပါပေါ့ ……… သွန်းးးးး စေတနာ ဗလပွ ရယ် က ၊ရွှန်းးးးးး ဝေဖြာ သဒ္ဓါကြောင်း ပါဗျ ၊
ဟော ဒီက ဂဇက်ရွာချောင်ကြားကို ၊ ချီးးးးး မြှောက်ရန်မကြာ ကြွပါတော့ ၊ နောက်တော်ပါ … မော်မော်တသိုက်ခြံရံလို့ ၊ လက်ပကျွတ် ကို ရင်မှာပိုက်ပါတဲ့ ၊
……… သြော် ……… ဂဇက်ရွာအပိုင်စား … နတ် ဦးခိုင်ကြီး ခင်ဗျားးးးးးးးးးး ………
သဒ္ဓါကြည်ဖြူ … ကောက်ညှင်းပူပူလေးရယ်နဲ့ ၊ အုန်းသီးဆန် ခတ်ထူထူခြစ်ပါလို့ …… ငှက်ပျောသီး ခတ်တုတ်တုတ် အခွံခွါ ၊ ရည်မွန်လက်ဖက်အကြော်စုံပါမကျန် ၊ ကွမ်းယာတော် ခြံရံလို့သာပေါ့ …
ဗလိနတ်စာအမှန်ကို ၊ ဗေါင်းလန်အောင်သုံးဆောင်ကြပါတော့ …
နောက်တော်ပါ အခြံအရံတစ်ကျိတ်ကိုလ ……
အောက်စင်မှာ ဆွမ်း တင်ထားပါရဲ့ ၊
ဆွမ်းဒကာ မောင်ဆာမိကလည်း ၊ အန္တရယ်အသွယ်သွယ်ဝေးစေကြောင်း …..
ဆုတောင်းလိုက်ပါ၏ ……… လော့အိန်ဂျလိမှာထိုင် ၊ နတ်ဦးခိုင်ကြီးးးး ခင်ဗျားးးးးးးးး …………… ။
(၁၅ မိနစ်ခန့်မျှ သုံးဆောင်စေရန် စောင့်ပြီး ပင့်ထားသောနတ်များ ပြန်ပို့ရန် ။ ပြန်မပို့ပါက သင့်ထံတွင် သောင်တင်သွားပါလျှင် တာဝန်မယူ )
ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ ၊ မဲမှောင်စွာ မိုက်လှပါသော … …
မြန်းဂဇက်မြို့ပိုင် နတ်ဦးခိုင်ကြီး ခင်ဗျားးးးးး ………
ပုံးးးးး ပြောင်အောင် သုံးဆောင်ပြီးပါပေါ့ …… ဆွမ်းးးးဒကာ ဝမ်းသာပီတိတွေဖုံးပါလို့ ၊
များးးးးးးးမကြာမှီ အကြွေးရှင်လာတော့မှာမို့ ……
ပြန်လမ်းကို ကြွကာမြန်းပါတော့ ……
သာဓုသံ လှိုင်လှိုင်ရွတ်လိုက်မယ် ၊ ဂဇက်ရွာတပိုင်စား ……… နတ်ဦးခိုင်ကြီး ခင်ဗျားးးးးးးးးး ……………
သာဓု …… သာဓု ……… သာဓု ………
ရာသီစာလေးတော့ ကျွေးလိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိလို့ပါ
သဂျီး အကိုးကွယ်ဗူး.. သာမီးဒေါ်ဂလေးဂိုဗဲ ထိပ်ထားအရာ တင်မြီ…
အာ့ ပြီးးရင် အဲ့ မုန့် တွေ စားးး လို့ ရ ပြီ လားး ဟမ်???
အဲ .. ဦးသွားပြီ ဟ ..
မုန့်ဆန်း နဲ့ သီးမွှေးငှက်ပျော ဆို ပိုကြိုက် ..
စောစောမှ မထပဲ ဟာကို။
ဆွမ်းတင်တဲ့ မုန့်စားဖို့ လာတာ ပန်းကန်ပဲ ဆေးရမယ့်ပုံ။
မမြင်တွေ့ရသည် အဘိဓမ္မာစာအုပ်ထဲကနတ်ကို ပူဇော်ပသမည့်အစား…. အခုလို လက်တွေ့ မြင်တွေ့နေရသည့် မန်းဂေဇတ်ရွှာ နတ်ဦးခိုင်ကို ပူဇော်ကြသည့် အတွက်ပို အကျိုးရှိပါသည်ဟုမြင်ပါသည်….
အဘိဓမ္မာ မပါကြေးလေ ဟေးဟေး
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညကပဲ ဘေးအိမ်က ဦးရှင်ကြီးတင်လို့ မုန့်ဆန်း နဲ့ ငှက်ပျောသီးစားလိုက်ရသေးတယ်…
ခုတလောမတော့ ဦးရှင်ကြီး နတ်ပင့်ဆရာ လက်တောင်မလည်ဘူးဗျို့…
နတ်တင်လိုက်လို့များလားမသိဘူး ဒီနေ့မနက် ကော်နက်ရှင် တော်တော်ကောင်းနေတယ် .. မိုးတွေအရမ်းသဲနေတာတောင်မှ အေးဆေးဖြစ်နေတာ …
ကွင်းပိုင်ကြီး နဲ့ ပိုင်ဖို့လိုသနော
ကိုဆာမိ ပို့စ် မြင်မှ
သတိရတယ်…။ မဒမ်ဘလက်ကို သတိပေးဦးမှ…။
နတ်စစ်သူကြီး ၁၀ ပါး ရှိပြီတဲ့
အဲဒါ အဲဒါ :hee:
နှစ်ထပ်စင်မရှိလဲအောက်ပွဲလေးတော့ပေးမှရမယ်နော
ကျုပ် ပွိုင့်က ပြည့်ခါနီးလေပြီ
တော်ကြာ ပင့်ပြီး ပြန်မပို့လို့ကတော့ ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှ တစ်နေလိမ့်မယ်
ပြန်ပို့တာ မပြန်ရင်တော့ ဂွကျပြီကွ
သူရို့ထဲ နတ်တစ်ပါးက အစားကြီးတယ်ဆိုဘဲ
သများ အဲ့လိုတင်လိုက်ရင် အိုင်ပတ်တအိုင်ပတ်တစ်လုံးလောက် ရမှာလားငင် :
အဲ့ လို အ ရေး အ သား လေး တွေ ဖတ် ချင် လို့စောင့် နေ တာ
ဝါ ဝင် တ ခါ ရေး ပြီး ပြီ ဆို တော့ ဝါ ထွက် တော့ မှ ဘဲ ရေး မှာ လား
ဦးဆာကလည်း ခါတော်မှီစီးပွားရေးလုပ်ပေါ့.. ဦးခိုင်ကြီးနတ်တင်ခြင်း ဆားဗစ်စ်ပေးသည်လို့..
ကျမအိမ်ကိုလည်း ဆွမ်းတင်ရအောင် ကြွခဲ့အုံးနော်
ဦးခိုင်ကြီးနတ်က အပင့်လွယ်ပြီး အပို့မခက်အောင်တော့ တာဝန်ယူရမယ်နော်
ဒါပေမယ့် မပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်းဘူး
ဆာဆာ နတ်ပင့်နေဒါ ဖုန်းကနေ မနက်ကချောင်းကျိနေဒါ … လော့အင်ဝင်မရလို့…
အူးခိုင်ညက်နှာဂျီးနဲ့ လက်ပကျွတ်ကြီးပိုက်ပီး ငှက်ပျောသီးအခွံနွာစားမဲ့ပုံ မြင်ယောင်ကျိတာ… ဟိ
ဒါကြောင့်လဲ တစ်ချို့ပို့စ်တွေ မမန့်ဖြစ်တာပေါ့
မတော်… ကားမှောက်ပြီးအစိမ်းသေသွားရင်.. တလက်စထဲကိုးကွယ်လိုက်ကြနော…။
အခွင့်ကြုံတုန်း – အခွင့်ရေးပေးတုန်း –
ဦးခိုင်ကြီးနတ် ပူဇော်ပသဦးမှဘာ –
(ကယ်တော်မူပါ – ရွာ့ပြင်ထုတ်တော်မူဘာနဲ့)
ကဆာမိရယ်​ စကားမစပ်​ဗျာ ခီဗျားစာဖတ်​​နေရင်း မဆီမဆိုင်​ ​ကျော်​ရဲ​အောင်​ ဦးရှင်​ကြီးပင့်​တဲ့ ဇာတ်​ကားသွားသတိရဗျာအစအဆုံးမကြည့်​လိုက်​ရလို့ဘာကား ဆိုတာ​တော့ မ​ပြောနိုင်​ဘူးဗျာ ။ အတည်​အခန့်​​တွေကြားမှာ အ​သော အ​ထေ့​လေး​တွေက စာ​ရေး​ကောင်းရင်​​ကောင်းသလို စိတ်​အဟာရ ဖြစ်​​စေပါတယ်​ ဗျာ ။
သူ့ကို ပူဇော်ပသ တာ ကိုတော့ ပြုံးပြုံးကြီး နဲ့ သဘောတွေ့နေတယ်။
ကျုပ်တို့ ရွာ က မင်းလူ ရဲ့ ဇာတ်လမ်း ဆိုရင်တော့ ကဆာမိ ကို ဦးဖိုးဝြော့ နေရာမှာ ထားမယ်။
ဒီ ခိုင်နတ် က အသားမပါဘဲ တင်ရင် လက်ခံသတဲ့လား။
ဒါနဲ့ Ko out of… တောင်ပြန်ပေါ်လာပေါ့။
အရီးမုတ်ဆိတ်ပြောတာမှန်သဗျ…ဒီ ခိုင်နတ် က ကိုဘေးနွားကင်နဲ့ ဒါဘယ်ဘလက်နဲ့ပင့်ရင် ပိုမြန်မြန်ကြွဆိုပဲ
ပေးတဲ့သူက. ဖူးမျှော်မာန်လျှော့ကန်တော့ပြီး.. အလကားပေးတာပဲ..
ကျုပ်က.. ပါးစပ်ထဲတွေ့တဲ့ ဆုမွန်တွေပေးလိုက်.. ပြီးတဲ့ကိစ္စ..
ဟိုမှာ.. အလှူရှင်ခမြာ.. ဘယ်တော့ရမှန်းမသိ.. နောက်ဘ၀ရမယ်တောင်မသေချာတဲ့ဆုမျှော်ပေးနေလောက်အောင်… ဖြစ်နေတော့ကာ…
မှတ်ချက်။ ။ ကိုဘေးနွားအသားက.. တယ်နူးညံ့ဆိုပဲ..။ စားဖူးတဲ့သူရှိလားဟင်င်င်…။
ဒါဘယ်ဘလက်ဆိုတာ.. ဘလက်လောက်ကောင်းလို့လား..။ သိချင်သား..။ :buu:
ဘလက် ကောင်းတယ် ဆိုမှတော့ ဒါဘယ် ဘလက်က ပိုကောင်းမှာပေါ့။
ဘယ်လိုကောင်းလဲ ဆိုတာ သများ ပို့(စ) ရေးပေးမယ်လေ။
၂ မျိုးလုံး ပို့လိုက်။
ရှေ့လထဲ တရုပ်တွေ တစ္ဆေကြီးပစ်တော့မှ
နွားကင်နဲ့ ဒါဘယ်ဘလက် တင်ပေးမယ်
တစ္ဆေနဲ့ သဂျီးနတ် ဘယ်သူပိုကြီးလဲ
ဒါကြောင့်… ဦးခိုင်ကို နတ်တင် ပူဇော်မယ့်အစား..
ကိုယ့် ကိုယ် ကိုပဲ…နတ်တင် ပူဇော်ပါမယ်.. ။
အခုလို ဝါဝင်ဝါထွက်ဆိုရင် မောင်ကျောက်စ် အားကြီးစိတ်ညစ်ပါတယ်…
မိဘတွေက ဧရာဝတီတိုင်းဇာတိ ၊ အဖေ့အလုပ်က သင်္ဘောသားဆိုတော့…
ဒီလိုအချိန် နေဝင်ဖျိုးဖျနဲ့ မနက် အရုဏ်တက်ဆို လေးတိုင်စင်နဲ့ အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး…
မောင်ကျောက်စ်လည်း ရိုးရာအတိုင်း “အဘိုး… အဘိုး” တ ရတာ အားကြီးစိတ်ပိန်…
အိမ်မှာက မိန်းမသားတွေချည်းဆိုတော့ … ကျောက်စ်ပဲ တာဝန်ကျသပေါ့ဗျာ…
အရွယ်ရောက်တော့ ရွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ ဘိုလိုတောင် ဦးရှင်ကြီး ပင့်လိုက်သေးတယ်… ခွိ
ဂလိုလုပ်… “ဆြာဆာ ဆြာကျောက်စ်” ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီထောင်လိုက်ကြရအောင်…
ဆုံးသွားတဲ့ ကျနော့် အဘိုးက ဗိုလ်ကလေးသား
ဆိုတော့ အိမ်မှာ ဦးရှင်ကြီးတင်တဲစင်တောင် ရှိသေးတယ်
ခုတော့ မတင်တာ ဆယ်နှစ်လောက်တောင် ရှိပြီထင်ရဲ့
ဒီနတ်ပင့်လေးနဲ့ ပြန်တင်ရရင် ကောင်းမလားမသိ